organique gluten maimaim-poana tsaramaso mainty spaghetti - China organika gluten maimaim-poana tsaramaso mainty spaghetti Supplier,Factory -Qianna
Ny tena ilaina ny mainty dia mainty spaghetti tsaramaso tsaramaso , izay manana tombontsoa ara-pahasalamana maro.
Ny tsaramaso mainty misy asa antioxidant kokoa noho ny hafa tsaramaso. A fianarana, nivoaka tao amin'ny Journal of fambolena sy ny sakafo Simia in 2003, nanambara fa tsaramaso miaraka amin'ny voa akanjo mainty voarakitra more flavonoids. Flavonoids dia loko-phytonutrient famokarana loko izay miasa toy ny Mahasalama eo amin'ny tena hiadiana amin'ny aretina sy ny afaka mitovy hevitra. Phytonutrients no fototra Kamban-teny, bebe kokoa tompon'andraikitra fa ny fototra ny loko noho ny hafa, fa manampy ny fototra ny fahaizana ho tafita velona amin'ny taratra UV sy ny aretina.
Black tsaramaso ny atidoha ihany koa ny manome ny ilaina asidra amine, vitaminina, ary ny mineraly. Misy otrikaina, anisan'izany ny vitaminina sy ny folate B9, anjara lehibe ao amin'ny lalàna ny asidra amine manokana fa ny rafi-pitatitra dia mitaky.
Organic tsaramaso mainty spaghetti
Fangaro: tsaramaso mainty voajanahary vovoka, rano